Shina fanavaozana ny lafaoro mpanamboatra sy mpamatsy | Dongfang
Endri-javatra 1. Steam Reformer dia reaktera ao amin'ny famokarana hidrozinina misy fiovam-po, izay fitaovana fanalahidy. 2. Ity lafaoro fanavaozana setroka ity dia reaktera mafana be ivelany ivelany izay namboarina ho toy ny karazana endrika ho an'ny lafaoro fananganana noho ny fihetseham-po mahery vaika sy ny hafanana amin'ny fanodinana. 3. Ny katalorana dia mafana be ao anaty fantsom-panavaozana, ary ny fampahalalam-baovao amin'ny alàlan'ny fandriana cataly dia mihetsika. 4. Ny toetra mampiavaka izay ...
1. Steam Reformer dia reaktera ao amin'ny famokarana hidrozinina misy fiovam-po, izay fitaovana fanalahidy.
2. Ity lafaoro fanavaozana setroka ity dia reaktera mafana be ivelany ivelany izay namboarina ho toy ny karazana endrika ho an'ny lafaoro fananganana noho ny fihetseham-po mahery vaika sy ny hafanana amin'ny fanodinana.
3. Ny katalorana dia mafana be ao anaty fantsom-panavaozana, ary ny fampahalalam-baovao amin'ny alàlan'ny fandriana cataly dia mihetsika.
4. Ny toetra mampiavaka ny fanavaozana ny etona amin'ny lafaoro fanavaozana hafa dia tokony hodinihina, ao anatin'izany ny firafitry ny lafaoro, ny fitaovana fantsona, ny fanitarana ny rafitra fantsona ary koa ny fanonerana, ny fandrehitra, ny fantson-tsolika ary ny fitsinjarana, ireo fitaovana famerenam-bola, sns.
300,000t / y Fanendrena fanavaozana mitohy
1 tapitrisa t / y Fanorana fanavaozana mitohy
1,2 tapitrisa t / y Fanoharana fanavaozana mitohy
1,4 tapitrisa t / y Fanoharana fanavaozana mitohy
Taloha: Preheater amin'ny rivotra
Manaraka: Ny fatana fandoroana
fizarana fanafana , Railway , Machine Chill , Heureur Transit , fampihenana Block , Ironisaly .